konaungnaung on Flipboard | Michelangelo, HTC One, Google Maps
Recent reports suggest that HTC could bring its next flagship smartphone, code named "M8," to the big four US providers by the first quarter of next year.
Can your mobile phone becomeareplacement for manually typing inapassword? That’s the promise ofanew application called Knock, launching today, which uses an iPhone paired withaMac desktop or laptop
A new comScore report estimates that Google may have lost the Maps battle on the iPhone, despite Apple’s initial problems with its own mapping software solution (see one such example pictured above). has
အခြေအနေဆိုးနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခါမှာလည်း စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ကြည့်တတ်ရင် လုပ်လို့ ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ် ဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်။ တစ်ခါတလေတော့ …
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် - မုံရွာမြို့နယ်
၂၃. ၁၀. ၂၀၁၃(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ နံနက်(၇း၀၀)နာရီ၊ ကျောက္ကာလမ်း၊ မြဝတီရပ်၊ မဟာကန်ဦးကျောင်းအရှေ့ဘက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၂၀၀၈ခုနှစ်) …
အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီများ ခေါင်းထောင်လျှင် ဒီမိုကရေစီပြိုလဲနိုင်ဟု ပညာရှင်သတိပေး -------------------------------------- ရန်ကုန်၊ …
အမျိုးသမီးတွေဟာ နေရာရမယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ရှိဟုဆို 2013-06-28 အမျိုးသမီးတွေဟာ Space ဆိုတဲ့နေရာသာ ရမယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ရှိတယ်လို့
အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ အမျိုးစောင့် ဥပဒေမူကြမ်းနှစ်ခုကို လွှတ်တော်ဆီ …
Attacked Buddhist Religious Sites In Bangladesh Now Under Construction
မွေးကင်းစ ကလေးငယ်အလောင်းအား စွန့်ပစ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိ
ချောင်းဦး၊ ဇွန် ၂၈ မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ငါးယှန်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း အုတ်တံတိုင်းအနီး ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့မနက် ၇ နာရီ ခွဲအခိန်ခန့်က …
Gannett's National News Desk
Gunmen kill 10 foreign tourists after storming hotel in remote part of northern Pakistan, Police say - @ReutersIndia
CNN - By Phil Black. Matt Smith and Catherine E. Shoichet, CNN
The computer contractor who exposed details of U.S. surveillance programs was on the run late Sunday, seeking asylum in Ecuador with the aid of the anti-secrecy group WikiLeaks, the organization and Ecuador's
The Resident: Why Americans hate their jobs
Deadly attack in Pakistan